Maninona ny fianarana no fitaovana fampiroboroboana lohalaharana ho an'ny mpivarotra | Martech Zone
Maninona ny fianarana no fitaovana fampiroboroboana lohalaharana ho an'ny mpivarotra
Sabotsy, Oktobra 17, 2015 Zoma, Oktobra 16, 2015 Barry Kelly
Hitanay ny fitomboan'ny marketing amin'ny atiny tato ho ato - ary saika mihombo ny olona rehetra. Raha ny marina, hoy ny Ivotoerana Marketing Marketing, 86% ny B2B mpivarotra ary 77% amin'ny B2C mampiasa mpivarotra marketing ny atiny.
Saingy ny fikambanana manan-tsaina dia mandray ny paikadim-barotra amin'ny atiny ho amin'ny ambaratonga manaraka ary mampiditra atiny fianarana an-tserasera. Nahoana? Noana ny atiny fanabeazana ny olona, ​​dodona ny hahafantatra bebe kokoa. Araka ny Tatitra momba ny fahitana manodidina, ny tsena manerantany amin'ny fianarana an-tserasera an-tserasera dia hahatratra $ 53 miliara amin'ny taona 2018.
Ny atiny fianarana an-tserasera dia miara-miasa amin'ireo fiara-miasa marketing hafa toy ny lahatsoratra, ebooks, lahatsoratra amin'ny bilaogy, infografika ary horonan-tsary, saingy mamela ny vina sy ny mpanjifa handalina lalindalina kokoa ary hianatra bebe kokoa aza.
Amin'ny maha fitaovana fampiroboroboana ho an'ny mpivarotra azy, ny marika, na ny B2B, na ny B2C, dia mieritreritra ny fomba ifandraisan'ny fianarana an-tserasera ao anatin'ny tetikadiny ara-barotra mandritra ny lalana mividy sy ny androm-piainan'ny mpanjifa iray manontolo.
Mbola tsy resy lahatra? Ny porofo dia ao amin'ireo isa. Ny angon-drakitra asehonay dia mampiseho ny mari-pahaizana mahavariana eo an-toerana ho an'ireo izay mirotsaka amin'ny traikefa voafantina - 10 ka hatramin'ny 90 minitra no salan'isa isaky ny traikefa ianarana misy fotoana isaky ny fotoam-pivoriana manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 45 minitra.
Andeha hojerentsika izay mitondra ireo metrika miavaka ireo.
Ahoana ny fomba hitrandrahana fianarana
Ny fahalalana dia manosika ny fahalalana, ny fahalalana dia mitondra mpampiasa / mpanjifa mahery. Eo an-tampon'ny fantsona, ny mpanjifa dia mitaky antsipiriany bebe kokoa amin'ny antsipiriany rehefa mandray fanapahan-kevitra mividy izy ireo; Tian'izy ireo ny fampahalalana bebe kokoa hanamarinana ny safidiny. Na dia mety ho masoivohon'ny marika tena tsara aza ireo mpandinika, mpiara-miasa ary fianakaviana amin'ny antoko fahatelo, ny marika iray dia tsy afaka manadino ny andraikiny manampy / mitaona ny fanapahan-kevitry ny fividianana.
Ny atiny fanabeazana toy ny torolàlana momba ny vokatra, ny fandalinana ny manam-pahaizana ary ny webinar dia afaka manampy amin'ny famindrana ny navigateur ho mpividy. Ohatra tsara amin'ny fanabeazana presale izay tiako horesahina dia Nil any manga. Ny marika dia nanangana fizarana iray manontolo izay manampy amin'ny fanabeazana ny mpividy. Blue Nile dia nanaiky fa ny fividianana diamondra dia mety hahagaga, ary toy izany koa amin'ny torohevitra, FAQ ary torolàlana dia mamorona traikefa mividy tsaratsara kokoa ary amin'ny farany dia mpanjifa mahay kokoa.
Ny fotoana tsy manam-paharoa ho an'ny fikambanana sy ny marika dia ny fanolorana traikefa ahafahan'ny mpividy hovidiana hiditra lalina amin'ny dingana mialoha ny fividianana amin'ny alàlan'ny traikefa ianarana voahevitra tsara.
Mampitombo ny fananganana zaza ny fianarana. Raha eo am-piasana ny tontolon'ny rindrambaiko hanadio ny kanto kanto amin'ny fidirana an-tsokosoko ho an'ny mpanjifa vaovao miaraka amin'ny firoboroboan'ny vokatra, ny fanangonana data, ary ny fanombohana torohevitra, ny tontolon'ny vokatra ara-batana dia ao anatin'ny vanim-potoana maizina, miankina amin'ny boky torolàlana fampianarana. Ny sasany nametaka ny elanelana misy amin'ny Youtube, saingy ireo dia tsindry iray monja miala ny mpifaninana akaiky indrindra.
Ny vokatra sarotra dia mety hahatonga ny mpanjifa hahatsapa ho samy manana fanamby sy kivy. A fianarana vaovao vao tsy ela akory izay no naneho fa ny fampiharana iray amin'ny dimy dia ampiasaina indray mandeha ihany. Rindrambaiko maro no mbola ilaozana satria tsy ampiakarina amin'ny fomba mahomby ny mpanjifa.
Mihatra amin'ny vokatra rehetra io - ara-batana na nomerika. Zava-dehibe ny mitaona aingam-panahy, manabe ary mampifandray ilay mpanjifa vaovao amin'ny marika sy amin'ny fiarahamonina hafa rehefa mandray ny dingana voalohany izy ireo. Fotoana ahafahana mamaly fanontaniana ihany koa ary manampy amin'ny famolavolana ny fahitan'izy ireo ny marika, ny vokatra ary ny serivisy mialoha.
Miteraka fifandraisana lalina sy misy dikany ny fianarana. Misy fifandraisana matanjaka eo amin'ny fitomboan'ny sandan'ny androm-piainany sy ny haavon'ny fanabeazana ny marika sy ny vokatra. Eritrereto ireo mpampiasa anao faran'izay lehibe: mividy bebe kokoa izy ireo, mitory bebe kokoa ary mividy vokatra sy serivisy mifandraika amin'izany amin'ny taha ambony noho ny hafa.
Rehefa mamorona atiny ho an'ny mpampiasa efa misy, zahao ny zavatra tian'ny mpihaino hianaranao. Fantaro izay ilain'ny mpihaino sy andrasana ary ampitao amin'izy ireo izany fampahalalana izany. Toy ny marketing amin'ny atiny rehetra dia tokony hisy ny atiny fianarana manokana.
Manangana fiaraha-monina ny fianarana. Ny singa iray lehibe amin'ny famoronana fifandraisana maharitra sy mahasarika dia ny fampandrosoana ny fiaraha-monina mpanjifa. Ny vondrom-piarahamonina biolojika dia mivelatra manodidina ny marika sy ny vokatra izay ajanona amin'ny mpampiasa ny fitandremana sy ny antonony (amin'ny ankamaroan'ny tranga). Sehatra matanjaka ny fantsona haino aman-jery sosialy, saingy amin'ny faran'ny andro dia tsy sehatra fampitam-baovao izy io, ary voafetra ny fidiranao amin'ireo mpanjifanao, ny angon-drakitra ary ny fahafaha-mitaona ny tsy fivadihan'ny marika sy ny sandan'ny androm-piainany.
Ny fifandraisana sy ny fifandraisana eo amin'ny samy mpiara-miasa dia mivoatra ao anatiny sy miaraka amin'ireo traikefa ianarana nomerika. Ny fifandraisana sy ny fifandraisana dia voafitaka amin'ireo mpanangana vaovao, ary ny mpanjifa tsy voafetra dia manohana sy mpanentana mahery vaika.
Ohatra lehibe amin'izany Fomba fisorohana an'i RodaleU—Izay misy ny mpanjifa miditra salama. Ankoatry ny torohevitra video sy ny toro-hevitra avy amin'ny marika dia mifanakalo sary sy lesona nianarana ireo mpanjifa mba hampanan-karena kokoa ny traikefa.
Ny fotoana ifaneraserana fanampiny amin'ny sehatry ny marika dia sarobidy ary manome fotoana fanampiny fanampiny hifaneraserana amin'ilay mpampiasa ary hiteraka tsy fivadihana sy fifandraisana.
Teny fampisarahana: Manaova dieny izao
Angamba ianao mahita fotoana iray hieritreretana ny fomba ifandraisan'ny fianarana an-tserasera amin'ny paikadinao amin'ny varotra ankapobeny? Ny vaovao tsara dia mety manana vaultin'ny votoatiny ianao izay miandry fotsiny ny hamerenanao ny atiny fianarana an-tserasera. Ity misy toerana fanombohana:
Izay manam-pahaizana fantatra izay nanome ny teny fototra tamin'ny hetsika indostrialy? Manolora fivoriana Q & A an'ny mpikambana irery miaraka aminy ao amin'ny seha-pianarana. Na angataho izy hampianatra taranja mivantana!
Ireo boky torolàlana momba ny vokatra mankaleo ireo — mamelombelona azy ireo miaraka amin'ny fanampian'ny manam-pahaizana momba ny vokatra ary omeo azy ireo ny famolavolana fianarana dizitaly miaraka amin'ny fifaneraserana, ny demo ny vokatra ary maro hafa.
Ireo fivoriana voarakitra tamin'ny kaonferansa farany nataonao? Afatory izy ireo (ary amidio amin'ny alàlan'ny maodelin'ny famandrihana misy laharana).
Santionany fotsiny amin'ny fomba mety efa an-tanan-tànanao ny mianatra atiny. Na inona na inona efa anananao dia atombohy anio ny resakao miaraka amin'ireo CMO sy CDO anao ary aza adino ity fotoana hisian'ny fifamofoana ity. Raha mahatsiaro ho diso tafahoatra ianao, Indostria nieritreritra faly manampy anao handinika fomba hananganana paikady fianarana.
Tags: andraikitrafianaranafianarana an-tserasera
Barry Kelly dia CEO sy mpiara-manorina Indostria nieritreritra. Tompondaka amin'ny mpanjifa mianatra, mpivarotra ary manavao ny fianarana nomerika izy. Ny asany dia nifantoka tamin'ny fanampiana ireo marika sy fikambanana vontoaty hampiasa ny herin'ny e-fianarana hampiroborobo sy hampivoatra ny orinasany.
Tapglue: Fitaovana azo ovaina hamadika ny vokatrao amin'ny tambajotra sosialy.